VPA အဆင့်များ | FLEGT
ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPA) လုပ်ငန်းစဉ်သည် အဆင့်များစွာ ပါဝင်သည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆင့်တစ်ခုစီသည် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုစီဖြင့် အဆုံးသတ် ပါသည်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည် နောက်အဆင့်တစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းရန်အစဖြစ်ပြီး အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အကြားဆက်ဆံရေးနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲများ၏ သဘောသဘာဝကိုပြောင်းလဲကောင်း ပြောင်းလဲ နိုင်ပါသည်။
သို့ရာတွင် အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ရာတွင် VPA လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံများ အကြားနှင့် VPA ဖြစ်ထွန်းမှုအပေါ်မူတည်၍ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ VPA လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရန် စာရင်း(Checklist) သို့မဟုတ် ပုံသေဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် အချို့ကွဲပြား ခြားနားသည်ဟုထင်ရသည့် အဆင့်များသည် အမှန်တကယ်တွင် ထပ်ကောင်းထပ်နေပါလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်း စဉ်သည် သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံရှိ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအကြား အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပွဲများမှ ထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ VPA လုပ်ငန်းစဉ်အားရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ရန် အစိတ်အပိုင်းအဆင့်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ ယခုဖော်ပြချက်သည် ယနေ့အချိန်ထိVPA လုပ်ငန်း စဉ်အများစုတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကို အကြမ်းဖျဉ်းဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်သော်လည်း အနာဂတ်တွင် VPA လုပ်ငန်းစဉ်များ မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်သင့်သည်ဟု ကြိုတင်ဖော်ပြနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
ကြိုတင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအဆင့်။ ဤအဆင့်တွင်သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံသည် အမျိုးသားအဆင့်အကျိုး ဆက်စပ် ပတ်သက်သူများနှင့် ဆွေးနွေးပြီး VPAတွင် ပါဝင်သင့်မသင့်ကို စဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား အဆင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် ဆွေးနွေးပွဲများအတွက် ၎င်းတို့အချင်းချင်း စုစည်းခြင်းနှင့် သတင်းပေးခြင်းများစတင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများမှ ကြိုတင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအဆင့်တွင် ပိုမိုလေ့လာပါ။
ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအဆင့်။ သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံအတွင်း အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့များအတွင်း နှင့် အကြား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းများနှင့် နိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် EU အကြားဆွေးနွေးခြင်းများက VPA တွင်ပါဝင်မည့် အကြောင်းအရာများကို သတ်မှတ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို တရားဥပေဒအရ ချည်နှောင်ထား သည့်သဘောတူညီချက်တွင်အခိုင်အမာထည့်သွင်းထားပါသည်။ VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများမှ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအဆင့်တွင် ပိုမိုလေ့လာပါ။
အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် VPA ကို တရားဝင်ဖြစ်စေပြီး EU နှင့် မိတ်ဖက်နိုင်ငံ များတွင် နိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်များအတွက် ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်ကို လိုက်နာပါသည်။ VPA အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် နှစ်ဖက်အဖွဲ့ဝင်များ ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြီးဆုံးပြီး VPA အားစတင် အကောင်အထည်ဖော်ချိန်တွင်စတင်သည်။ လက်ရှိအချိန်ထိ အတည်ပြု လက်မှတ် ထိုးခြင်းသည် လအနည်းငယ်မှ တစ်နှစ်ကျော်ခန့်အထိ ကြာမြင့်တတ်သည်။ အတည်ပြုလက်မှတ်ထိုး လိုက်ခြင်းဖြင့် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံမှ FLEGT လိုင်စင်များကို ထုတ်ပေးခွင့်ရှိသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ရှေးဦးစွာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် VPA တွင် သဘောတူညီထားသည့် တရားဝင် ၏သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ်၏ ရှုထောင့်များအားလုံးလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်နေရန်သေချာစေရမည်။ မကြာခဏဆို သလို ဤအချက်သည် VPA လုပ်ငန်းစဉ်၏အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းအဆင့်တွင်ရှိနေ သောစနစ်များကို နောက်ထပ်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း နှင့်၊ သို့မဟုတ် ပိုမိုကောင်းမွန် အောင်ပြုလုပ်ခြင်းများလိုအပ် ပါသည်။
အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအဆင့်။ VPA လုပ်ငန်းစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအဆင့်သည် နှစ်ဖက် အဖွဲ့ဝင်များမှ သဘောတူညီချက်ကို အတည်ပြုလက်မှတ်မထိုးမချင်း တရားဝင်မစတင်ပါ။ သို့ရာတွင် အမှန်အားဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များသည် မကြာခဏ အတည်ပြု လက်မှတ်ထိုးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်မပြီးဆုံးချိန်တွင်ပင်စတင်တတ်သည်။ ဤအဆင့်တွင် VPA အကောင် အထည်ဖော်နေသည့် အဖွဲ့ဝင်များ သည်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ နှင့် တရားဝင်သစ်ဖြစ် ကြောင်းအာမခံသည့် စနစ်များအပါအဝင် ၎င်းတို့သဘောတူညီထားသည်များကိုဖြစ်ပေါ် စေပြီးအကောင် အထည်ဖော်ပါသည်။ နှစ်ဖက် အဖွဲ့ဝင်များက VPA တရားဝင် ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်ကို အတူတကွ ပူးပေါင်းအကဲဖြတ် ခြင်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း စနစ်တကျလည်ပတ်သည်ဟု ယူဆရသည့် အချိန်တွင် မှ FLEGT လိုင်စင်ပေးခြင်းကို စတင်နိုင်ပါမည်။ FLEGT လိုင်စင်ပေးခြင်း စတင်ပြီးချိန်တွင် ဥပဒေနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ဆက်လက်ပြုလုပ် သွားနိုင်ပါသည်။ ပါဝင်သည့်အဖွဲ့များသည် VPA ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို စောင့်ကြည့်၍ သီးခြားလွတ်လပ်သော စာရင်းစစ်များ၏ အစီရင်ခံစာများကို သုံးသပ်ခြင်း ပြုလုပ်နေရပါမည်။ VPA တွင် အဆုံးသတ်သည့်နေရာမရှိပါ။ ပါဝင်သည့်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဖက်ဖက်မှ စာချုပ်အားရပ်တန့်မည်ဟု မဆုံးဖြတ် မချင်း အကောင်အထည်ဖော်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ အကန့်အသတ်မရှိ ဆက်လက် ရှိနေမည်ဖြစ်သည်ဟု VPA ကမျှော်မှန်းပါသည်။ VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများမှ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအဆင့်တွင် ပိုမိုလေ့လာပါ။
VPA လုပ်ငန်းစဉ် ၏ ကြိုတင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအဆင့်
VPA အား လက်မှတ်တိုရေးထိုးခြင်း၊ လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့် အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းA
Falconer, J. 2013. Overview of VPA processes: opportunities and challenges for projects to advance FLEGT. Presentation to FLEGT Project coordination meeting.9October 2013, Brussels. [တာနက်မှPowerpoint presentation အား ရယူရန်]